Iingoma ezivela ngoMeyi 1: ezintle, ezihlekisayo, ezifutshane, ezihlekisayo. Ukususela ngoMeyi 1, sivuyisana, imibongo kubalingane
Iimbongo ezintle ukusuka ngoMeyi 1. Iindinyana ezimfutshane zeesms zokubongela ngoMeyi 1. Ukuthokoza ngokusemthethweni kwindinyana ukususela ngoMeyi 1, 2016 kubalingane
Imbali yeeholide ngoMeyi 1 ixhomekeke ngo-1886. Ngaloo ndlela, e-Chicago, i-American Federation of Labor yashicilela isiteyimu, injongo yayo yayikunciphisa umhla wokusebenza ukususela kwiiyure eziyi-15 ukuya kwii-8. Ngenxa ye-rally, kwakukho ukulimala kwabantu, ukulimala kunye nokubanjwa kwekhulu "abavukeli". Emva kancinci, ngomnyaka ofanayo, isigqibo senziwe ngenkumbulo yamaqhawe omzabalazo wamalungelo abantu abasebenzayo ukuba bamise ngokusemthethweni ngoMeyi 1 Usuku lwaMazwe ngamazwe loManyano lwabalandeli bamazwe onke. KwiSoviet Union, le holide yafumana imeko yelizwe kwaye yathi "ngumhla obomvu wekhalenda." Njengezinye iholide "ezinzulu," ngo-Meyi 1 bhiyozelwa nge "big swing" enkulu-imiboniso enesidima, abantu abakhethiweyo abaneentyatyambo, iibhola kunye neeflegi. Namhlanje, ngoMeyi 1, ilahlekelwe "ipomposity" yakhe kwaye ibonwa njengesizathu sokuhlangana nabantu abasondeleyo. Ngaloo suku oluzukileyo lwentwasahlobo ndifuna ukukholisa abahlobo kunye nabaqhelana nabo ngovuyo ngoMeyi 1. Yaye yintoni ezwakala ingcono kunezibongo? Lapha ungayifumana imibongo emihle ngo-Meyi 1 kuyo yonke into efanelekileyo: kubahlobo abasondeleyo-ukupholisa okufutshane, okusemthethweni kunye "nokuqinileyo" - oogxa kunye nabaphathi, kunye neengqungquthela zezingane ezinokumangalisa zingafundwa kwiholide kunye namadoda.
Ivesi elihle -livuyisela ngoMeyi 1, 2016
Abaninzi bajonge phambili ngoMeyi, ngexesha epholile ukuphumla kwindalo kwinkampani enomdla. Ewe, akukho mibukiso yemikhosi namhlanje, kodwa abantu bayonwabile ukwabelana ngokufudumala ngoMeyi 1. Yintoni onokuyinqwenela ngaloo mini? Ngokuncediswa kweqoqo lethu leengoma ezilungileyo ukusuka ngoMeyi 1, unokufumana unyanconywa ngokusuka enhliziyweni kwaye unqwenela kubahlobo kunye nabo osebenza nabo.
Izibongo ezintle ezihlekisayo-zivuyisana ngoMeyi 1, 2016
Eyokuqala kaMeyi iholide evuyayo, enomsindo kunye nenjabulo, into enomdla ukuchitha kwisangqa sehlobo kunye nezihlobo. Ngaba uya kuvuya ngoMeyi? Ukongeza kokutya, thatha nawe kwimeko ehlekisayo ukuhalaliswa kwindinyana ukusuka ngoMeyi 1. Sinikela ukukhetha kweendinyana ezahlukeneyo ukusuka ngoMeyi 1 - khetha kwaye uvuyiswe!
Iindinyana ezimfutshane ukususela ngo-Meyi 1 - ii-SMS zivuyisana ngoMhla we-Spring kunye neMisebenzi
Ngentwasahlobo ukuvuswa kwendalo, kukho uluhlu lweeholide ezilindele ixesha elide, enye yazo ithathwa njengokuqala koMeyi. Abanikazi bama-cottages ehlobo bajonge phambili ekuhambeni kweentsuku, ngenxa yokuba eli xesha lingasetyenziselwa ukuxhamla kwiibhedi. Kwabaninzi, ngoMeyi 1 sisihlandlo esimangalisayo ukulungiselela imibuthano enobungakanani kwendalo kunye neentlash shish kebab "ngomsi". Iindinyana zethu ezimfutshane ukususela ngoMeyi 1 ziya kuba luvuyo olumnandi kwiimeko eziqhelekileyo, ziyakuthunyelwa ngefom yesms, kwaye zizakufunda iholide kunye nabantwana.
Imincili yokuqala kwiimvesana ukusuka ngoMeyi 1 - osebenza nabo
Umhla wokuqala kaMeyi uthathwa njengemini, ngakho-ke niyavuyisana nabo osebenza nabo ongayithumela ngefom ye-text message. Siyanivuyisa kwangaphambili kwiindinyana ukusuka ngoMeyi 1, eziza kubhenela kuphela abasebenzi bakho, kodwa nakuzo "ulawulo oluphezulu". Uvuyayo kuqala! Namhlanje uMhla wokuQala kaMeyi "ngokuthobeka" kuthiwa yiHholide leSwitzerland kunye neMisebenzi kwaye kuthathwa njengesithuba sokuphumla emva kwemihla yomsebenzi. Yaye masibe nemiboniso yesikhokelo kunye neibhaluni kunye nokuqhelaniswa kweengcinga zeli holide ukuya kwixesha elidlulileyo - uMeyi Usuku luhlala lunye lweeholide ezithandayo kakhulu entwasahlobo. Vulela bakho abahlobo kunye nabo osebenza nabo ngoMeyi 1 ngoncedo lweengoma ezihlekisayo. Iindinyana ezimfutshane ukusuka ngoMeyi 1 zingathunyelwa ngendlela yomyalezo wesicatshulwa. Ngomhla kaMeyi!
Iingqungquthela malunga nootitshala abahle kunye nokuchukumisa iinyembezi
Amakhadi anamnandi kunye noMaslenitsa ka-2018 ngeentsuku zeveki: ngokuvuyisana, imibhalo nemibongo
Ukudibanisa noMnyaka omtsha waseTshayina 2016: umhla wokubhiyozela kwaye uyathokoza kakhulu
I-pizza nge-zucchini kunye nengqolowa
Iimpawu zonyango ze-bird cherry
Kutheni ndibe neenwele ezinde?
Indlela yokwenza itiye yemveliso kwizityalo zemithi?
Amafritter ane-ricotta namaapulo
Imfundo yesikolo eRashiya
Indlela yokupompa iinyawo zakho ekhaya
Kutheni amadoda adinga ukulala ngesondo, kwaye abafazi bathanda
I-Rozhiki ebusika - zokupheka zokupheka - i-pickled, i-salted (ebandayo kunye ne-salting efudumele), epholile. Caviar kwi-ginger ebomvu ebusika kwi-multivark